Nayan - A Journey through eyes.
WELCOME TO NAYAN - A JOURNEY THROUGH EYES
Nayan isacollection of isolated dreams. (कविता, भावना र गीति कथा सङ्ग्रह)
उनी रिसाइन क्यारे मस“ग । मेरा दुई शब्दले उनको मन भा“चिदिए छ क्यारे । जीवन र प्रेमको मात्र दुई शब्दले तर म निर्दोष छु म यी दुई शब्दहरूलाई अलग गराउन सक्दिन“ । संर्षहरूलाई असारको भेलस“गै समेटेर आकाश र बगरको मिलन खोज्दै जीवनको बेसीतिर बगिरहने इन्द्रावतीलाई तिमी दोषी नभन । नत्र म पनि भन्छु एउटा सुन्दर फूल पनि दोषी छ, ऊसग लाखौंलाख ह्दय घोचिदिने का“डाहरू छन् ।
कसैले माया गर्छु भन्दैमा माया बस्ने हो त ? होइन पटक्कै होइन । माया त कहिल्यै पनि ख्याल ठट्टा गर्दैमा, कसैले दुई ह्दयलाई जबरजस्ती जोड्दिदैमा बस्दैन । माया भन्नु स्वतन्त्र आकाशमा उडिरहने चरी हो । माया आफै बस्छ, मायाको आफ्नै बाटो हुन्छ । माया त जीवन हो, माया कसैको स्वार्थको शब्द होइन पनि कसैको निजीगत शब्द होइन । माया त एउटा पवित्र शब्द हो जहा“ संसार उभिएको हुन्छ । माया पूजा हो ।
नौलो संसारको यात्रामा जीवनको रफ्तारलाई दुई मुठ्ठी श्वासले विदाइ गरी, आप्mना सारा सम्बन्ध टुटाउन सफल भएकीमा उनी आफुलाई भाग्यमानी ठान्लिन पनि । आखिर जीवन सबैको उही न हो , एक न एक दिन त मर्नु नै पर्छ । उनि हिजोको वर्तमान र आजकी कहाली लाग्दी सम्झना हुन । बाचुञ्जेल अनिशा नाम पाएकी थिइन अव छा“या बनि सबको मन मस्तिष्कबाट विस्तारै विलाउ“दै कहानी बन्दै छिन ।
म सानो छदा एकै चिज मेरो मनमा उर्लिरहन्थ्यो ‘म किन स्वतन्त्र छैन’? । मेरो आफ्नो निजी जीवन हो चाहेमा एक मिनेटमै अन्य गर्न सक्छु भने किन म बाटोबाटो ना¨ै हिड्न सत्तिन ? किन सारा कृत्रिम साइलाहरूले प्राकृतिक जीवनलाई बेरिदिन्छ ? आखिर जीवन मेरो होइन र ? आकाश हेर्थे सर भन्नु हुन्छ यसको अन्त्य कतै छैन । त, कति ठूलो छ आकाश ?
Whyaflower blooms?
किन फुल्छ फुल?
You being infront of me
तिमी सामुन्ने हुँदा
माया साचो छ
मेरी प्यारी कान्छी दिदी
29.11.2013 मेरी प्यारी कान्छी दिदी, मनभरिका अनगिन्ति सम्झना अनि मुटुभित्र संगालेको स्वप्नील प्यार तिमीलाई । जसरी तिम्रो ओठमा मुस्कान फुलिरहेछ, हातमा सफतलाको दियो जलिरहेछ, यो सदा सदा रहिरहोस् यो दुःखी भाईको कामना । तिम्रो लागि सायद यो परजिवी भाइको के नै बन्न सक्ला र नबीन खवर तर पनि आज धेरै दिन भइसकेको छ तिमी मदेखि टाढा गएको त्यसै त्यसै आफू एक्लो भएको महसुस लागेर मात्र यो पत्र कोरेको हु । कहिले काही त सोच्दी हौं हामी बीचको सम्बन्ध रगतको नभएर मनको भावनाले बाधिएको भए पनि कति सुमधुर छ भनि । तिमीलाई कति खुसी लागेको छ मलाई थाहा नहुन पनि सक्छ तर मलाई यति मात्र थाहा छ कि तिमी मेरी दिदी हौं र म तिम्रो भाइ नै हु“ चाहे म आ“खा खोली भनु वा आ“खा बन्द गरी रगतको साइनोले नै नछोए पनि के भो र ?
आखिर जीवन के हो ? मानव जीवन चोला के हो ? जीवनको अर्थ मात्र जन्म र मृत्यु हो ? जन्म मृत्यु होइन भने के हो ?
मलाई लाग्छ जीवन त एउटा कष्टपूर्ण जन्म र मृत्युको चक्र हो । मृत्यु त निश्चित छ नै । कसैले रोकेर रोकिने बाला छैन । त अर्थ के छ जीवनको ? के मृत्यु वरण नै उद्देश्य हो जीवनको? त्यसो भए यो जीवनलाई त्यागी दिउ ? यदि साच्चीकै जीवन संजाय हो भने के अर्थ छ दुई मुठी श्वासको साहारामा यो पापी संसारमा जीवन गुजार्नु ? गणितीय हिसाबमा जीवन बाचेर घाटा नै देखिन्छ भने माटो र पानीले बनेको खोक्रो आडम्वरलाई किन माटो र पानीमा विलिन नगर्नु ? अर्थहिन अतित्वलाई क्षणभरमा नै समाप्त किन गर्नु ? किन डराउछौं हामी ? सक्दैनौं एक घुट्को विष पिउन, आफ्नो गलामा फा“सिको माला गा“स्न ? यदि सक्दैनौं भने कायर नामर्र्द हौे । कुनै न कुनै रूपमा स्वार्थी हौं । जब चारैतिर अन्धकार अन्धकार नै छ भने, आफू वरिपरि साङ्गाहरूले बेरिएको छ भने के अर्थ नै हुन्छ एउटा जीवन धड्कन मात्रको साहारामा ? जीवन पथभर का“डैका“डा छ भने एउटा का“डा त झिकौला जसो तसो तर सबै झिक्न असंभव छ... । संघर्ष गरौला कराउ“ला चिच्चाउला आखिर निश्चित जित मेरो हु“दैन । हामी त सिर्फ दास हौं, समयको दास ।